Factory fanongotam-bolo laser - Mpanamboatra fanesorana volo laser, mpanamboatra
1200W diode laser volo fanesorana volo sano laser Painless Diode Laser Hair Removal
Fanaintainana 1200W 755 + 808 + 1064nm Fanesorana volo Laser Diode
Hery lehibe 1200W
Bara laser iraisana amerikana
Warranty mitifitra 100 tapitrisa
Tatitry ny fitsapana herinaratra 1200w
Rafitra fanatanjahantena mahira-tsaina thermostatic
Sehatra fanesorana volo mamaky volo izay manambatra fampiasa farany amin'ny fampiononana tsy manam-paharoa. Misaotra ny 4 cm lehibe2ny haben'ny toerana sy ny rafitra mangatsiaka mandroso, ny fitsaboana ankehitriny dia haingana kokoa ary tsy misy fanaintainana - manolotra vahaolana mivoatra lehibe ho an'ny marary sy ny mpitsabo. Ny rafitra laser P-808 diode dia manararaotra ny tombony amin'ny halavan'ny halavan'ny telo mitambatra, miaraka amin'ny traikefa ananan'ny marary sy fomba fiasa mifantoka amin'ny orinasa, mamorona vahaolana vaovao miavaka sy mitarika eo amin'ny tontolon'ny fanesorana volo matihanina.
laser ho an'ny fanesorana volo 755 808 1064 diode machine
Ny teknolojia fanesorana volo laser diode dia mifototra amin'ny dinika mazava sy hafanana mifantina. Ny laser dia mamakivaky ny hoditry ny hoditra hahatratra ny fakan'ny folikelin'ny volo; ny hazavana dia azo tsentsina ary avadika ho vatan-doha foliky ny volo, hany ka mamerina indray ny volo tsy misy ratra manodidina ny sela. Tsy dia manome fanaintainana firy, fandidiana mora, teknolojia azo antoka indrindra amin'ny fanesorana volo maharitra izao.
Salon hatsaran-tarehy maharitra matihanina vaovao 755 808 1064nm fanesorana volo laser 808 diode laser fanesorana volo
Ny rafitra dia mampiasa ny halavan'ny volom-borona manala volo 808nm diode ho an'ny fidirana lalina ao anaty dermis izay misy ny follicle volo. Amin'ny fomba fitsaboana, andiam-pitenenana malefaka ambany, ny pulses famerimberenana avo dia mampiakatra ny mari-pana amin'ny follicle volo sy ny manodidina, ny sela mamelombelona hatramin'ny 45 degre Celsius. Ity fandefasana hafanana miandalana ity dia mampiasa ny chromophores ao anaty vatan'ny manodidina azy ho toy ny fitoeram-bolo hanafana ny folon'ny volo. Io, miaraka amin'ny angovo hafanana entin'ny volo volo mivantana, manimba ny follicle ary manakana ny fitomboana indray.
P-afangaro ny fanesorana volo laser amin'ny halavan'ny andalana telo
P-808 System, mampiasa laser manokana miaraka amina Pulse-Width 808nm lava, dia afaka miditra amin'ny follicle volo.
Ny fampiasana teôlôma mitroka hazavana voafantina dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fanamainana ny volo sy ny volon'ny taovolo, ary koa hanapotehana ny fikorontanan'ny volo sy ny oxygen ao amin'ny follicle volo.
Rehefa mivoaka ny laser, rafitra miaraka amina teknolojia fampangatsiahana manokana, ampangatsiaho ny hoditra ary arovy ny hoditra tsy ho voarary ary hahatratra fitsaboana azo antoka sy milamina.
p-mix diode laser fanesorana volo miaraka amin'ny valiny fanesorana volo maharitra
Sano Laser diode system dia mampiasa laser manokana miaraka amin'ny halavan'ny 3-808nm / 755nm / 1064nm 3 izay afaka miditra amin'ny fololon'ny volo. Amin'ny fampiasana teôria firafitra hazavana fisafidianana, ny laser dia azo alentika amin'ny alàlan'ny melanin ny volo ary avy eo manafana ny volo sy ny volon'ny volo, koa manapotika ny follicle volo sy ny oksizenina manodidina ny folikelin'ny volo. Rehefa mivoaka ny laser, rafitra miaraka amina teknolojia fampangatsiahana manokana, ampangatsiaho ny hoditra ary arovy ny hoditra tsy haratra ary hahatratra fitsaboana azo antoka sy mahazo aina!
Ao amin'ny sehatry ny rafitra fanesorana volo mifototra amin'ny angovo, ny laser diano Sano Laser dia miavaka amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fanolorana teknolojia manapotipotika mba hahomby amin'ny fomba fitsaboana haingana sy tsy misy fanaintainana.
P-Mix 755 + 808 + 1064nm milina fanesorana volo laser
755 808 1064nm Diode laser fanesorana volo dia indrindra ho an'ny fanalana volo matihanina.
Toy ny fanesorana maharitra ny volo-molotra, ny volombava, ny volo amin'ny tratra, ny volon'ny armpit, ny volon'ny rantsambatana ary ny volo tsy ilaina amin'ny faritra amin'ny vatana. Mety amin'ny karazana hoditra sy volo rehetra izy io.
ity milina ity dia nankatoavin'ny FDA sy ny fitsaboana CE.
Izy io dia manana fonja mahery vaika 2000W avo be, sakan'ny pulse fohy fohy, noho izany ny fitsaboana tsy misy fanaintainana, ary ny halavan'ny androm-piainana lava, tsy misy fetra fitifirana.
Masinina fanesorana volo Laser Dieter 125w 808nm
Ny milina fanesorana volo maharitra laser 808nm Diode dia natao indrindra ho an'ny fanalana volo matihanina.
Ny rafitra laser semiconductor 808nm dia mampiasa laser laser mahazatra miaraka amin'ny halavan'ny 808nm. Ny laser semiconductor dia mamoaka onja maivana infrared, izay afaka miditra lalina amin'ny fakan'ny follicle volo, manafana ny loko ao aminy ary manaparitaka azy amin'ny follicle volo iray manontolo, izay mety hanimba ny follicle volo nefa tsy miteraka fahasimban'ny sela mifanila aminy. Fanesorana volo maharitra.
Masinina fanesorana volo laser amin'ny alàlan'ny 1200w 755 + 808 + 1064
Ny milina fanesorana volo laser P-MIX 755 808 1064nm dia natao indrindra hanesorana volo matihanina.
Milina fanesorana volo Laser8w 808nm azo entina
P-MIX 755 808 1064nm Diode laser fanesorana volo dia indrindra ho an'ny fanalana volo matihanina.
2000W 755 + 808 + 1064nm fanesorana volo laser
fanesorana ny holatra, Masinina mpanentana hozatra Ems, Co2 Laser Laser miato, Shr Ipl Opt, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Laser estetika Co2,